Episode 01 ( 514 MB )
Openload Solid Drive Mega
Episode 02 ( 529 MB )
Episode 03 ( 540 MB )
Episode 04 ( 505 MB )
Episode 05 ( 537 MB )
Episode 06 ( 540 MB )
Episode 07 ( 540 MB )
Episode 08 ( 538 MB )
Episode 09 ( 505 MB )
Episode 11 ( 538 MB )
Episode 12 ( 527 MB )
Episode 13 ( 552 MB )
Episode 14 ( 550 MB )
Episode 15 ( 484 MB )
Episode 16 ( 519 MB )
Ruler : Master of the Mask ( 2017 )
2017 ထဲမှာ အ hot ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက တစ်ခုလို့ ပြောရလောက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် … MBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ တခြား Korea Historical Drama တွေ Historical ကို ရှေးခေတ်မှာ ပြန်ရိုက်ပြလို့သာ ထည့်လိုက်ရတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ အရင်က MWD , MRTV တို့မှာ ပြနေကြ…
3D Kanojo: Real Girl ( 2018 )
မိုးအေးအေးလေးနဲ့ Animeကောင်းကောင်းလေးကြည့်ဖို့အတွက် 3D Kanojo: Real Girl ( 2018 ) ဆိုတဲ့ Animeလေးပါ စုစုပေါင်း ၁၂ပိုင်းရှိပြီး IMDb 7.2/10ထိရရှိထားပါတယ် Review………. Tsutsui Hikari ဟာ otaku တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ otaku ဆိုတာနဲ့အညီ လူသူကြားထဲမှာ အံမဝင် အများကလဲစိတ်ပျက်စရာလူလို့သတ်မှတ်ခံထားရသူတစ်ယောက်ပါ။ အထက်တန်းတက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မှာသူ့လိုမျိုး otaku သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သာရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ…
2018ထွက် Ongoingလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Where Stars Landတဲ့ 😉😉😉 အဓိကမင်းသားကတော့ လီဆူယွန်းအဖြစ်Tomorrow with you/Signal ထဲကမင်းသား Lee Je Hoonဖြစ်ပါတယ် လီဆူယွန်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကတော့ လေယာဉ်ခရီသည်ဝန်ဆောင်ရေးဌာနမှာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး တစ်ယောက်ထဲနေတတ်သူ သူမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားကိုလျိုဝှက်ပြီးသာမာန်ဘဝနဲ့နေထိုင်ချင်သူတစ်ယောက် အဓိကမင်းသမီးလေးကတော့ ဟန်ယောရွန်းအဖြစ်မင်းသမီးလေးကတော့မိတ်ဆက်စရာမလိုအောင်မကြာခင်ကမှပြီးသွားတဲ့’Robot’ဇာတ်ကားထဲကrobotမလေး Chae Soo Bin ဖြစ်ပါတယ် ဟန်ယောရွန်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကတော့ သူလုပ်ချင်တဲ့လေဆိပ်ဝန်ထမ်းကိုခက်ခက်ခဲခဲ ရရှိထားသူ စိတ်အားထက်သန်ပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားပေမယ့်အမြဲပြဿနာရှာတတ်သူ လုပ်ငန်းခွင်ကိုဆူညံအောင်လုပ်နိုုင်စွမ်းရှိသူ လို့လေဆိပ်ဌာနမှာနာမည်ကြီးသူ…
12 Nights ( 2018 )
ဒီတစ်ခါတော့ MMATVမှ အမျိုးများကို Channal Aမှ ထုတ်လွင့်ပြသနေတဲ့ 12Nightဆိုတဲ့ Mini Seriesလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် – ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် နယူးယောက်တွင်အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကာ အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကျိုးစားနေရှာတဲ့ဂျနီဖာ/ဟန်ယူဂျောင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးရယ် -ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတွင်နေထိုင်းပြီး အကပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့အိပ်မက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ် -အချိန်ကာလအားဖြင့် 2010ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားရာသီတွင်ခရီးစဉ်သုံးနေရာ ဆယ့်နှစ်အိပ်ခရီးကို ထွက်လာကြရင်း အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် လေယဉ်ကူးပြောင်းဖို့စောင့်ရင်းမှ……. -သူတို့တွေရဲ့ ရေစက်ဆုံမှုအရ အန်ဂုဒုံဆိုတဲ့ ပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့မြို့လေးမှာ တွေ့ဆုံကြပြီး ဆယ့်နှစ်ရက်တာကာလအတွင်းအချစ်မှာကျရှုံးသွားကြပုံကို…